Date My Pet » Zvinoreva Kuva Kiss
Zvinoreva netsvodo? The miriyoni Dhora mubvunzo pakugarisana. Ndinofunga unofanira kuiisa panotaurwa ukama uri uye munhu muri ukama. Kana uri munhu aivapo ukama zvichienzaniswa ukama hutsva kuti zvinoreva kunogona siyanei pachena asi unhu hwehama uri pamwe anezvakawanda chokuita zvazvinoreva kwavari zvakare. Ngatidyei Kutarira siyana zvichirehwa kuti mbiri, kana zvisina kudaro rinobwinya, kisi.
Kana rudo rwenyu ndirwo kudanana, tactile mhando ipapo unenge kufara chaizvo zvave kugeza mukati kutsvoda! The old kudanana zvinotora rudo zvakakomba uye kutsvoda yavo uchazara kudziya, chido uye rudo. Kurigamuchira asi nechokwadi kuti avaratidze risingagumi rudo shure. Ita zvaunogona kuti kunyange kana usiri kupfuura kudanana zvakasikwa pachako. The kudanana mhando achafanana ichi kunyange ukama hutsva kana vakaita ukama asi sezvo ukama inokura uye mberi kutsvoda yavo ichava zvakawanda uye hunogutsa.
The ruchiva Type
The ruchiva mhando muukama mukati zviri chinoshamisira vari kubatwa kwekushinywa munyu asi akanakidzwa zvakadaro! Nokufamba kwenguva kutsvoda izvi achatsausa kukara kuda kana ukama anowana zvakawanda zvakakomba. Just kuzvipa nguva. The ruchiva mhando anotora nguva yavo kuti rudo mumwoyo yavo asi kana uri mumwe wavo Vachareurura muzive nezvazvo! Uye kutsvodana yavo ichava nzira imwe vanoita!
Kune mhando kutsvoda zhinji kubva renguva mberi achingoverengera, wakazadzwa kutsvoda kuti nyoro, zvinyoronyoro. Pane paruzhinji anoratidza rudo uye pasiri anoratidza rudo.
The nokutsvoda renguva mberi brimming kutsva chiratidzo rudo rwechokwadi. Havadi miromo yavo kuti kusiya zvako zviri nani zvikuru uye akanaka umo kuti nguva muri vaviri mumwe munyika yose, wakakwidzwa nechinguvana uye zvikuru unobatanidza kuburikidza nesimba kutsvoda.
The nyoro, zvinyoronyoro ndeimwe iyo zvakawanda vakaroorana murudo kushandiswa. Ndiyo nguva apo vari chaizvoizvo rokunyaradza pamwe chete asi Zvinoshamisa kuri kutsvoda iyo vanhu vakawanda vanoshandisa vavo vokutanga kutsvoda nokuti kusununguka uye chokwadi sei kutaura izvi guru nguva mune ukama hwavo.
The paruzhinji kisi rinogona akatora imwe nzira mbiri uye zvichienderana munhu uri nechokuita, uchaziva mutsauko vavo tiite. Imwe nzira iri kushamisira kuti vane mumwe unova akaipa rutivi asi pachigadziko zvakanaka divi vamwe vanoita izvi nokuti vanozvikudza newe uye regai hanya anoziva muri pamwe chete.
Vanhu vazhinji havadi yose hwepachena kuratidzwa rudo asi hazvirevi havadi iwe. Kufanana yavose kutsvoda kunyange inogona akatora nzira mbiri uye zvakare zvichava kuvimba munhu uine. Zvichava nyore kuti uzive kana vari vachikisana imi moga nokuti havatendi kana vane netsa pamwe PDA kana iri nokuti aisadada Zvakwana imi kukutsvoda paruzhinji.